कसैलाई रिझाउन अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्नु गलत हो  : श्रेष्ठ- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कसैलाई रिझाउन अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्नु गलत हो  : श्रेष्ठ
'अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र त्यसको अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि हो । कसैलाई रिझाउन स्वेच्छाचारी ढंगबाट जुन अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत हो ।'
काठमाडौँ — राष्ट्रपतिबाट आइतबार ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ जारी गरिएपछि विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले आश्चर्य लागेको बताएकी छिन् ।
सरकारले २०७५ साउन २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न समिति र संसद्मा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी श्रेष्ठसँगको कुराकानी :
नागरिकता अध्यादेश कस्तो लाग्यो ?
यो अध्यादेश विधि र पद्धति मिचेर स्वेच्छाचारी ढंगले ल्याइएको हो । नागरिकप्रति जिम्मेवार भएको देखिएन । संविधानमा भएको कुरा त कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । नागरिकतासम्बन्धी कानुन उहिले नै ल्याउनुपर्ने थियो । हामीले उक्त कानुनलाई दुई वर्षअघि नै ल्याउन खोज्दा अनेक खालका बखेडा झिके । समितिले प्रक्रिया पुर्‍याएर संसद्मा लगिसकेपछि त्यहीँबाट टुंगो लगाउनुपर्ने हो । नागरिकताको विधेयक संसद्मा छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पारित गर्न तयारी अवस्थामा थियो ।
संसद्मा के कारणले विधेयक टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ?
विधेयक छिटो पास गरेर नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीलाई असहज नहोस् भनेर मैले काम गरेकी थिएँ । तर मेरो काममा रोक्न खोज्ने त उहाँहरू (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँनिकट नेता) नै हुनुहुन्थ्यो ।
मैले प्रधानमन्त्रीसँग मात्र होइन, दलका उपनेता (सुवासचन्द्र नेम्वाङ) देखि पार्टीका अन्य मन्त्री र नेताहरूसँग पनि पटक–पटक भेटेर यसलाई सबै पार्टीसँग छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्‍यो भनिरहें । नागरिकता नहुँदा हक अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुन्छन् भनेकी थिएँ । प्रधानमन्त्रीलाई त म समिति सभापति हुनासाथ बालुवाटारमा पुगेर नागरिकता विधेयक यही अधिवेशनमा टुंग्याउनुपर्छ भनेकी थिएँ र त्यहीअनुसार काम गरें । त्यसपछि मैले सरोकारवाला र पीडित सबैलाई बोलाएर छलफल गरें । पछि उहाँहरूले अघि बढाउनै खोज्नुभएन ।
अंगीकृत नागरिकताको विषयमा तपाईं र प्रधानमन्त्रीको मत बाझिएको थियो र होइन ?
विधेयकको ९९ प्रतिशत काम सुरुवातका दुईदेखि तीन महिनाभित्रै सकिसकेको थियो । अंगीकृत (वैवाहिक) नागरिकताबारे मात्र निर्णय लिन बाँकी थियो । अंगीकृतबाहेक समितिमा सबै सर्वसम्मत भएको थियो । तर त्यो एउटा विषयलाई लिएर धेरै खेल खेलेर अघि बढाउन दिइएन । सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीकहाँ धाएँ । मन्त्रीहरू, पार्टीका अन्य नेतालाई पनि बोलाइयो । एउटा सहमति पनि भयो तर सहमतिलाई कार्यान्वयन नै गरिएन । विधेयक प्रतिवेदन समितिबाट पास गरिएको थियो । तर फेरि फुल हाउसमा अड्काइयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले किन ल्याए त नागरिकता अध्यादेश ?
संविधानमा जे देखिएको छ, त्यो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । नागरिकता जस्तो संवेदनशील, पहिचान र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयको कानुन ल्याउन ढिलै गर्न हुँदैन थियो । उहिले गर्नुपर्थ्यो, गरिएन । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र त्यसको अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि हो । कसैलाई रिझाउन स्वेच्छाचारी ढंगबाट जुन अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ ०९:०२
आइसोलेसनमा छैन पौष्टिक खाना
‘कोरोनाले बिरामी भएका बेला राम्रो खाना नपाउँदा झनै कमजोर भइयो’
जेष्ठ ११, २०७८ मेनुका ढुंगाना
अछाम — अछामको मंगलसेन नगरपालिका–५ की ३४ वर्षीया महिला र उनका श्रीमान्लाई दुई साताअघि कोरोना संक्रमण भयो । १७ दिनसम्म उनीहरू जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा बसे । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि श्रीमान्लाई अक्सिजन दिनुपर्‍यो । स्वास्थ्यकर्मीबाट उपचार पनि राम्रै भयो । तर खानपिन राम्रो नभएर दुवै जना कमजोर हुँदै गए ।
अछामको मंगलसेनस्थित जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा संक्रमित । तस्बिर : मेनुका/कान्तिपुर
‘बिहान चियाबिस्कुट दिन्थे । ११ बजेतिर खाना अनि साँझ खाना दिन्थे । मासुको त के कुरा दिउँसो चियासम्म पाइँदैनथ्यो,’ श्रीमतीले भनिन्, ‘हाम्रा बूढाबूढी दुवैलाई कोरोना भयो । घरमा ससाना केटाकेटी मात्र छन् । बाहिरबाट खाना ल्याइदिने पनि कोही भएनन् । कोरोनाले गर्दा गम्भीर बिरामी भएको बेला राम्रो खाना नपाउँदा झनै कमजोर भइयो ।’
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मंगलसेन–५ कै एक दलित दम्पतीलाई पनि दुई साताअघि कोरोना देखियो । श्वास फेर्न गाह्रो हुने भएपछि श्रीमतीलाई जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखियो । श्रीमान्–श्रीमती दुवै मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् । कहिले भारी बोक्ने, कहिले ढुंगा बोक्ने यस्तै काम गर्दागर्दै दुवैलाई संक्रमण देखियो र आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भयो । तर अस्पतालको १३ दिनको बसाइमा खानपिनको तालमेल नमिल्दा अहिलेसम्म गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।
‘अस्पतालभित्रै आइसोलेसन वार्डमा बस्यौं । क्यान्टिनबाट जे दियो त्यही खानैपर्‍यो । दाल, भात, तरकारीबाहेक अरू केही थिएन । कहिलेकाहीं बिहान चियासँग बिस्कुट दिन्थे । त्यत्ति नै हो,’ श्रीमान्ले भने, ‘आफू घरमा भएको भए पनि कसैसँग उद्यारो मागेर पनि राम्रो खाना खुवाउँथे । म पनि बाहिर आउन नमिल्ने, अस्पतालबाट पोसिलो खाने कुरा केही पनि नपाइने ।’
मंगलसेन–३ का अर्का संक्रमितका कुरुवाको अनुभव पनि उस्तै छ । अस्पतालले दिने खानाले मात्रै कोरोना जित्न नसकिने उनले बताए । ‘संक्रमितले के खाएमा कोरोना जितिन्छ भन्नेबारे सबैलाई थाहा छ । अस्पतालमा त पौष्टिक खाजा भनेर चियाबिस्कुट दिन्छन् । यस्तो तरिकाले अस्पताल जाने बिरामीलाई झन् गाह्रो हुन्छ ।’
पहिलो चरणमा संक्रमित भएका व्यक्तिलाई बिहान खाना, दिउँसो खाजा र बेलुकाको खानाको व्यवस्था भए पनि अहिले बिहानबेलुकाको खाना मात्रै दिइएको जिल्ला अस्पतालको क्यान्टिनका सञ्चालक रतन बोहराले बताए । ‘अहिले माछामासु पनि दिने गरेको छैन । अस्पतालबाट जे दिनु भन्ने खबर आयो हामीले त्यही दिने हो,’ उनले भने । संक्रमितका कुरुवालाई पनि संक्रमितले खाने जस्तै खाना दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ । अहिले अस्पतालहरू संक्रमितले भरिभराउ छन् । गत वर्षको तुलनामा मृत्युदर पनि बढी देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना लागिहाल्यो भने के खाने, कति खाने, केका लागि खाने ? यसबारे जानकारी राख्दा फाइदाजनक चिकित्सक बताउँछन् । ‘कोरोना निको हुने कुरा व्यक्ति स्वयंमा भर पर्छ । त्यसैले खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ । जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता (इम्युनिटी पावर) धेरै छ, उसले रोगसँग सजिलै लड्न सक्छ,’ चिकित्सकले भने, ‘त्यसैले आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई इम्युनिटी पावर बढाउने खानेकुरा खुवाउनुपर्छ ।’ जिल्ला अस्पतालले नै चाउचाउ र बिस्कुटजस्ता तयारी खाजा दिने गरेको छ । तर, यस्ता खानेकुराले झन् असर गर्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ ०८:४६